Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zeHong Kong zokuHamba » IHong Kong Ivula Ihlabathi jikelele ngeNene eyi-360 ° eyiyo eyiyo
IHong Kong Ivula Ihlabathi jikelele ngeNene eyi-360 ° eyiyo eyiyo
Kanye ecaleni kwesixeko saseHong Kong, indalo ikufutshane kunokuba umntu ecinga. Iqaqambisa lo mbuzo mhlawumbi ungaziwayo, iBhodi yezoKhenketho yaseHong Kong (HKTB) isungule "amaXesha ama-360 ° eHong Kong" phantse ivulela isixeko kwihlabathi. Umxholo ongaqhelekanga wale nyani yenyani yefilimu ukhumbuza abakhenkethi abalambele ukhenketho kunye neendwendwe ezizayo ukuba yeyiphi indawo entle kwaye ebandakanya konke okuya eHong Kong.
Bukela ifilimu ye-HKTB ye-360-degree VR kwi-intanethi ukuze uzicwilise kwindalo yendalo yaseHong Kong:
Eyokuqala kuthotho lwe-360 ° Hong Kong Amaxesha enziwe ngokukodwa ukuqaqambisa ngaphandle kweHong Kong. Ubunyani bokwenyani buthatha ababukeli kuhambo lokuntywila ngaphesheya kweHong Kong ngendlela elula ekulula ukufikelela kuyo. Ngelixa ubandakanyeka kwifilimu, umntu unokujonga esibhakabhakeni esimangazayo kwiincopho zeentaba ezintle kwaye umamele izandi ezolisayo zempompo.
Ukusuka esixekweni uye ezintabeni, nakwimimandla yonxweme ukuya kwiipaki, umfanekiso omangalisayo ubhaptiza ababukeli kwizingqisho kunye nemvakalelo yemiphunga eluhlaza yaseHong Kong, izisa abaphulaphuli behlabathi kufutshane neHong Kong ngangokunokwenzeka- nokuba bakuphi umhlaba.
BONA IIMPAWU EZIPHAKAMILEYO ZASEGEOPARK
IHong Kong ilikhaya elibonisa indawo ye-UNESCO yeLifa leMveli yeHlabathi eyaziwa ngokuba yiGlobal Geopark. Igcwele unxweme lwasendle kunye nokwakhiwa kwamandulo kunye neziqithi ezinamatye ezijikeleze unxweme. Iindwendwe zinokuthatha izikhephe okanye ziqeshe amaphenyane ukutyelela uninzi lwamalwandle kwaye ziqwalasele kufutshane kwaye zichukumise ukubetha kwamatye. Ezinye zinoburhalarhume, kunokwenzeka ukuba uzijonge ukusuka kukhuseleko lobugcisa.
Kwi-Double Haven liqela eliqhelekileyo leziqithi ezijikelezwe ngamanzi acocekileyo azive ngathi yi-South Pacific kune-Hong Kong. Thatha ngokulula isikhephe esivela eMa Liu Shui esiya eKat O ukuze uqalise ukujonga lo mmangaliso uluhlaza kunye nohlaza okwesibhakabhaka.
HAMBA UHAMBA kwicala lasendle
KwiNdawo yeNdawo yeNdawo yoKhozi, iindwendwe zinokuthatha uhambo kwicala lasendle ngale ndlela yomthunzi ngaphakathi kweLion Rock Country Park. Umzila kukuthatha uphakame ngokwaneleyo ukuba ungathatha indawo yokujonga ngaphezulu kweKowloon Reservoir, umbindi weentaba zeNew Territories, kunye neKowloon Peninsula ehamba phambili. Kufuphi ecaleni kwendlela, jonga iintyatyambo ezintle kunye nobomi beentaka- yindawo yokuhlala iiKhayithi eziMnyama- kunye neshishini lenkawu!
Kugqityiwe ngo-1910, i-Kowloon Reservoir yaba yeyokuqala kwiiNgingqi eziNtsha kwaye inoyilo olungqingqwa olukhethekileyo. Ukunyuka kwiGolden Hill Road kunye nePiper's Hill Road yindlela umntu afikelela ngayo kwi-Eagle's Nest Nature Trail. Lo mzila ulandela umlambo kwaye ukhokelele kwindlela elula yamatye.
SETHA AMAVA OBUKHENKETHO BAKHO OBATYELELEYO
Kwibhayisekile, oko kukuthi, ukukhwela ibhayisekile ngokuzonwabisa kwiindawo zenkcubeko kunye nolonwabo ukusuka kuYuen Long ukuya eButterfly Beach. Ukusuka embindini weYuen Long, oku kuhamba ngokulula ukuya ngaselwandle eTuen Mun kubonelela ngokudibana neelali zaseHong Kong kunye needolophu ezintsha, zithatha indawo yelifa lenkcubeko kumkhondo wokujikeleza phantse yonke indlela.
Indawo yokudlala yaseWu Shan ikumema ukuba uphinde uqhagamshele kunye nomntwana wakho ongaphakathi kwaye uthathe ujikeleziso njengoko ukubetha umoya wolwandle kubetha emithini. Ngelixa uhamba ngebhayisikile, umntu unokuma kwindawo emnandi yeButterfly Beach Park kwaye onwabele isanti kunye namaza aqengqelekayo.
AMANZI, AMANZI NDAWO YONKE
Ukusuka ekudadeni emanzini acocekileyo ukubhexa phezu kolwandle olupholileyo, amava amanzi ngokuqinisekileyo ayawucima umphefumlo onxaniweyo. Ababhenkethi banokuthatha uhambo olufutshane kwiSharp Island ebekwe eHong Kong kwi-UNESCO Global Geopark. Esi siqithi sincinci siphakamileyo likhaya lemiboniso yejoloji eyadalwa kwiminyaka ezizigidi ezili-140 eyadlulayo. Kulungile ukuba iindwendwe zikonwabele ukumangaliswa kwendalo kunye nokuntywila elwandle konke kube kanye.
Kulula ukurenta i-kayak ukusuka eSha Ha Beach kunye nokuhamba ngesikhephe ukuya kwelinye lamalwandle amaninzi kwiSharp Island ukuze ufumane usuku lokuphumla uzolile kwisanti enesanti kwaye ungene iinyawo zakho emanzini acocekileyo aluhlaza, ngakumbi xa yenziwe phantse! Kwaye i-Kiu Tsui Beach edibanisa amatye kunye nesanti ethambileyo yindawo entle yolonwabo lwamanzi njengokuntywila emanzini, i-kayaking, ukuqubha, kunye nokuqubha kwelanga emanzini.
OH, UBUHLE BOBUSUKU BOBUSUKU
Ngaba wakha waphupha iphupha lakho lasendle ucinge ulele phantsi kweenkwenkwezi eHong Kong? Zininzi iindawo ezintle zokumisa intente kunye neenkampu ebusuku okanye impelaveki ukusuka kumanxweme ukuya kwiindawo ezinentaba. Ngaba ungumthandi wokutshona kwelanga? Emva koko yiya eHam Tin Wan, enye yeelwandle ezine ecaleni kweMacLehose Trail, ngobusuku benkampu yaselunxwemeni. Olunye ulwandle - iSai Wan, iTai Wan, kunye neTung Wan - konke kulula ukufikelela kwiindlela ezimfutshane eziyinxalenye yeTai Long Wan kunye nemisitho yayo emangazayo yamehlo asempuma kweSai Kung Country Park.
Izinto ezintle zale ndawo zizibonelelo ezikhoyo apho umntu anokuqesha khona iibhodi zokusefa kunye neentente kunye neebhegi zokulala. Ngaba ufuna ukonwabela umlilo ofudumeleyo? Thatha nje iinkuni kwivenkile ekwisiza kwaye onwabele nokulunywa ukutya kwindawo yokutyela.
UKUTYA, UKUTYA OKUZUKILEYO!
Akukho luhambo lubonakalayo luya kugqitywa ngaphandle kokukwazi ukunambitha incasa yesitya sendabuko esidibanisa iindwendwe kwilifa lenkcubeko. IHong Kong igcwele amavumba avuselelayo aziprintayo engqondweni njengeenkumbulo ezimnandi nezithandekayo. Iindlela zokunyuka intaba zihlala zikhokelela kwiidolophana zakudala zokuloba apho iindwendwe zinokuhambahamba kwiimarike nakwiivenkile zokutya, lonke eli xesha zikhokelwa livumba elimnandi.
ILamma sisiqithi sesithathu ngobukhulu eHong Kong kwaye igcwele iivenkile zokutyela ezivela kwiintlanzi zaselwandle eziqhelekileyo ukuya kwiivenkile zangoku zaseNtshona Kukunyuka okufutshane kwaye kulula kwaye kuya kuzisa isymphony yeencasa kwiindawo zokutya zaselwandle eziqhelekileyo. Isiqithi sigcwele umoya okhululekileyo okhululekileyo kwaye likhaya leemvubu kunye neentlobo zokuyila- uyolo kungekuphela nje kwencasa yesonka kodwa nomoya ngokunjalo.
Kwaye leyo yindlela entle yokuchaza ukuba "ubomi obuluhlaza" bunika ntoni eHong Kong. Ngumthendeleko weemvakalelo kunye nedosi yokuhlaziya ingqondo nomzimba.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi malunga Ngaphandle kweHong Kong, nceda u tyelele: